वीर अस्पतालको लापरबाही, आइसियुमा सार्न पिसिआर मागियो, दुईको मृत्यु – Health Post Nepal
२०७७ जेठ २६ गते १६:३०
पिसिआर रिपोर्ट नभएको भन्दै आइसियुमा सार्न नमानेपछि वीर अस्पतालमा उपचाररत एक बिरामीको ज्यान गएको छ।
चारदिनदेखि फिमेल मेडिकल वार्डमा उपचाररत बिरामीको अवस्था गम्भीर बनेपछि आइसियुमा सानुपर्ने थियो। तर पिसिआर ( पोलिमरेज चेन रियाक्सन) रिपोर्ट नभएको भन्दै आइसियुमा सार्न नमानेपछि ती बिरामीको ज्यान गएको हो।
अस्पतालको फिमेल मेडिकल वार्डको १६ नम्बर बेडमा भर्ना भएकी कलेजोकी बिरामी बिना श्रेष्ठको सोमबार ज्यान गएको हो।
अवस्था बिग्रँदै गएर आइसियु सार्नुपर्ने भए पनि अस्पताल प्रशासनले पिसिआरबिना सार्न नमिल्ने भनेपछि ज्यान गएको अस्पतालका चिकित्सकहरूले बताएका छन्।
ज्यानै जाने अवस्था आएपछि केही चिकित्सकले पिपिई प्रयोग गरेरै आइसियु सार्नुपर्ने र आइसियुमा पनि आइसोलेट गरेर उपचार गर्न सकिने बताएका थिए। तर प्रोटोकल भन्दै प्रशासनले अनुमति नदिएको एक स्वास्थ्यकर्मीले बताए।
वीरमा नयाँ र पुरानो गरी १२ बेडको आइसियु छ।
त्यस्तै, फिमेल वार्डकै २० बेडमा उपचार गराइएकी फुलकुमारी तामाङको पनि आइसियुमा भर्ना लिन नमानेकै कारण ज्यान गएको छ।
पिसिआर रिपोर्ट भए पनि परिवारले पैसा डिपोजिट गर्न नसकेको अवस्थामा अस्पताल प्रशासनले आइसियु सार्न नमानेपछि उनको ज्यान गएको हो।
विपन्न उपचारका लागि सरकारबाट एक अर्बभन्दा बढी अनुदान पाउने सरकारको प्रमुख अस्पतालमै पैसाकै कारण आइसियु नपाउँदा मृत्युको घटना घटेको छ।
पछिल्ला दिनमा अस्पताल प्रशासनले आम्दानी घटेको र सरकारले दिने अनुदान कटौती भएको भन्दै विपन्नले पाउने सहुलियत सेवामा कडाइ गरेको छ। ‘पहिला पैसा नै नपाएर बिरामी ज्यान जाने अवस्था आउन दिनहुन्न भन्ने सोचअनुसार नै काम हुन्थ्यो,’ अस्पतालका एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले कुनै पनि नाममा सहुलियत नदिने भन्ने नीति बनेको छ’।
अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीले बिरामीलाई आइसियु सार्ने तयारी गर्दैगर्दा ज्यान गएको बताए। ‘बिरामी नै सिरियस थियो,’ उनले भने।
कोरोनाको रिपोर्ट नआएको कारण आइसियुमा उपचार नगरेको विषयमा उनले स्पष्ट जवाफ दिएनन्। ‘हिजो दिउँसो स्वाब लिएर परीक्षण गर्न पठाएका थियौं,’ डा. सेन्चुरीले भने, ‘सिरियस भएपछि आइसियु सिफ्ट गर्न क्रममा मृत्यु भएको हो।’
उनले पिसिआर रिपोर्ट भए पनि पैसा डिपोजिट गर्र्न नसकेका कारण आइसियु सार्न नमानिएको घटनाप्रति भने अनभिज्ञता देखाए।
One thought on “वीर अस्पतालको लापरबाही, आइसियुमा सार्न पिसिआर मागियो, दुईको मृत्यु”
RC khanal says:
आजभोली नेपालमा गजबै भईरहेछ, कुन विरामिलाई ICU वा भेन्टीलेटरमा राख्ने भन्ने निर्णय चिकित्सक होईन, प्रसासक गर्दछन, पैसा नहुनेले अस्पत्ताल नगपनि हुन्छ किन कि सरकारी अस्पत्तल भन्ने नाम मात्र हो, पैसा नभए कुनै उपचार हुंदैन, लासको मात्र PCR रिपोर्ट छिटो आउँ छ वा विरामिले आफ्नो PCR समयमा पाउन सक्दैन र मृत्यु हुन्छ ! यहिं हो त हामिले खोजेको गुणस्तरिय स्वास्थ्य !!